Bolts zvakajairika kuomarara index- Shanghai T&Y Hardware Indasitiri.
ms yakajairwa mabhaudhi
ms akakosha mabhaudhi
ms / isina tambo tambo
simbi dzesimbi dzesimbi
ms nzungu uye washer
Aluminium fasteners & aluminium cnc zvikamu
musha » Blog
Kuoma kweBolt kunoratidza kugona kwechinhu kudzivisa kupindira kwechinhu chakaoma mukati mayo. Icho chimwe cheakakosha mashandiro ekuratidzira esimbi zvinhu. Iyo yakakwira iyo yakaomarara kuoma, zvirinani kupfeka kuramba. Inowanzo shandiswa kuomarara index Brinell kuomarara, Rockwell kuomarara uye Vickers kuomarara.
Brinell kuomarara (HB) kune imwe mutoro (kazhinji 3000kg) kune imwe saizi (dhayamita inowanzo kuve 10mm) yakaomeswa simbi bhora yakamanikidzwa kupinda pamusoro pechinhu, kuchengetedza nguva, kurongedza, mutoro nenzvimbo yayo yekumisikidza reshiyo, Kureva, Brinell zvakaoma ukoshi (HB), muna makirogiramu / mm2 (N / mm2).
Rockwell Hardness (HR) Kana HB> 450 kana muyenzaniso wacho uri mudiki, haugone kushandisa iyo Brinell yekuomesa bvunzo pane Rockwell kuomesa kuyerwa. Iyo 120 ° kona yekona yedhaimani kana dhayamita ye 1.59,3.18mm bhora, iri pasi pekumanikidzwa mune yakayerwa zvinhu pasi pekumanikidzwa, iyo induction kubva pakadzika kwekuoma kwechinhu. Zvinoenderana nekuoma kwechinhu chekuyedza, chakakamurwa kuita zviyero zvitatu zvakasiyana kumiririra:
HRB: ndiko kushandiswa kwe100kg mutoro uye dhayamita 1.58mm yakaoma simbi bhora, kuomarara kunowanikwa kune kuomarara kwezvinhu zvakaderera (senge annealing simbi, cast iron, nezvimwewo).
HRC: 150kg mutoro uye kushandiswa kwedhaimani koni kumanikidza kupinda kuomarara kunowanikwa kwehukama hwakaomarara hwezvinhu (simbi yakaomeswa, nezvimwewo).
3 Vickers kuomarara (HV) kusvika ku120kg mukati memutoro uye iyo vertex angle ye136 ° yedhaimani koni yekudzvanya mune inoonekwa nzvimbo, iine zvinhu induction pamusoro penzvimbo yakakamurwa nemutoro kukosha, ndokuti kukosha kweVickers kuomarara HV). Kubva pane yatsanangurwa iri pamusoro inoratidza, kuomarara kweVickers ndechimwe chekuoma kwepamusoro. Iine hukama hwekushandurwa nemamwe madhiuniti akaomarara. Kuwedzera bhaudhi kuomarara kunoreva kuomarara kwepamusoro, izvo zvinhu hapana kuomarara mukati mezvinodiwa. Chete michini zvivakwa (yakasimba simba, goho simba uye kukanganisa kuomarara).
KUMASHUREBolt yekuongorora nzira
NEXTMaitiro Ekusarudza iyo mbishi zvinhu zve Fasteners
Room 1-706, No 288, Rongxing Road, Songjiang District, Shanghai China
Kodzero dzose dzakachengetedzwa: Shanghai T&Y Hardware Indasitiri.